Maroambiny Info. About. What's This?
Maroambiny dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Sambava, Faritanini Antsiranana. Ny isam-poniny dia 11175 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 71143 ary ny kaodin-distrika dia 711
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia vary. Ny zava-bolena lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vanille. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia girofle. Ny isanomby dia 481. Ny isanny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelanny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vary. Ny entana lafo vidy indrindra dia vanille. 70 isan-jatonny tanimbary no voatondraka aminny tohidrano na paompy. 1 ny mponina no manao asa tanana. 93 ny mponina no miasa tany. 1 ny mponina no miasa aminny fiompiana. 5 ny mponina no miasa aminny sampandraharaha. 385 no isanny kisoa.
Ahitana tobim-pahasalamana ao. Andalovanny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Misy fitrandrahana harena an-kibonny tany aminny fomba indostrialy. Ahitana kolejy ao aminilay tanàna. Tsy ny JIRAMA no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara lehibe. Ny faharetanny dia mankany aminny renivohi-paritany dia 19 ora. Ahitana lalana godorô ao aminny kaominina. Ny fotoam-pitaterana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 28 ora. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 105000 Fmg. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny haintany dia 105000 Fmg.
45 isan-jatonny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavanny vanim-potoana mety ahalanianny vokatry ny taon-dasa dia 5 volana. 5 isan-jatonny mponina no atao hoe manan-karena. 50 isan-jatonny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ny isanny vono olona tanatinny taona 1999-2001 dia 1. Ao aminny atao hoe faritra mena ilay kaominina. Ny isanny vakitrano tanatinny taona 1999-2001 dia 20.